ultrasonic ịgbado ọkụ akụrụngwa, ultrasonic plastic welder maka akwa
Ngwá ọrụ ultrasonic | ultrasonic welder | ultra sonic plastic welder na Akpaaka Frequency achụ
Mgbakwunye Ultrasonic bụ usoro mmepụta ihe nke na-eme ka ultrasonic vibrations dị elu na-arụ ọrụ na mpaghara ebe a na-arụ ọrụ arụ ọrụ ọnụ na nrụgide iji mepụta weld-state weld.
A-frequency Na-achụrụ ya ugboro ugboro, dabara adaba maka ịgbado ọkụ dị iche iche na ịkpụzi ngwa ngwa dị iche iche, ịgbanye ọtụtụ oge: ± 400HZ
Ihe Nlereanya: 15KHZ ultrasonic, ebu ugboro na 14.4-15.2KHZ nwere ike Automatic ugboro traceability
♦ Iji komputa CPU enyocha ihe omume dị iche iche ọsọ ọsọ ma gbanwee. Ihe nchekwa nchebe nke usoro "nlekota oru nchedo" oru gha emeghachi omume nye ihe ndi a: otutu okpomoku di elu na nsogbu di oke elu, nke na-ebute oke. Cessgbabiga ihe ókè nke ultrasonic generator, loosening nke solder isi, transducer ma ọ bụ transducer, ọdịda nke generator circuit, wdg.
♦ Ntinye aka na-eme ka ultrasonic generator na-akpaghị aka soro ma kwụọ ụgwọ maka mgbanwe na isi ịgbado ọkụ ugboro ugboro. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu, yikwasị n'elu elu ịgbado ọkụ ma ọ bụ mpekere n'isi, mgbanwe mgbanwe a ga-eme.
Wuru-na akpaka mgbe njupụta usoro. Na ultrasonic njupụta nwere ike gbanwee si 50% na 100% stepless imeghari dị iche iche ịgbado ọkụ ọrụ.
Na IGBT, mmeghachi omume ọsọ ọsọ 100 ugboro ngwa ngwa karịa nke silica gel ike tube.
ike 2000W 2600W 3200W 4200W
ikike 10-20 ugboro / min
Vingdị ụgbọ ala Ọkpụkpụ
Ogologo ogologo (Horn Journy) 75mm 100mm
Mmepụta Oge 0.01-9.99S ​​Kemeghi
Mpaghara Gburugburu Φ100 Φ200 Φ300 Φ400
Ọnọdụ njikwa Njikwa ọnụọgụ
Nsogbu ikuku na-arụ ọrụ 1-7 Ogwe
Arọ 90KG 90KG 90KG 120KG
akụkụ 450 * 750 * 1100mm 760 * 1000 * 1950mm
1. Ultrasonic ịgbado ọkụ Plastic Machine, aka n'iji ya gee ntị, dị mfe iji na mmezi.
2. ịgbado ọkụ site na oge, oge nkwụsị, oge weld na ijide oge. A pụrụ ịgbanwe nrụgide ọrụ.
4. Kacha akụkụ na elu mma butere pneumatic akụkụ
5. Transducer na booster dị elu.
6. Nchedo Onwe-Onwe Gị: Ruo ugbu a, Mkpochapu Ugboro, Otutu Okpomoku
7. Dị na oge 4 - 15 KHz, 20 KHz, 35 KHz na 40 KHz.
8. Ndenye ngwa changeover, elu ịgbado ọkụ onuete ike.
9. Kwesịrị ekwesị maka ọnya dị elu na oge okirikiri.
Ultrasonic ịgbado ọkụ na mpi / Ultrasonic ịgbado ọkụ Ebu:
A na-eji igwe na-ekpo ọkụ nke Ultrasonic na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ụlọ ọrụ eletriki, ụlọ ọrụ ahụike, ngwa ụlọ, akwa akwa, ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọ ngwaahịa, ụlọ ọrụ egwuregwu ụmụaka, na ihe ndị ọzọ.
Industrylọ ọrụ akpaaka: akụkụ ahụ rọba, ọnụ ụzọ ụgbọ ala, ụgbọ ala ụgbọ ala, ọkụ, enyo, ihu anyanwụ, akụkụ dị n'ime, nzacha, ihe na-atụgharị uche, mmụba na-atụgharị uche, bọmbụ, eriri, ihe nhicha rọba maka ọgba tum tum, Radiator, tankị mmiri breeki, iko mmanụ, tankị mmiri, mmanụ. tank, ikuku sooks, iyuzucha ọcha, tray efere, na na.
Plastic electronic: Mpempe mmiri mmiri akwadebechara, ngwaọrụ nkwukọrịta, ekwentị ndị na-enweghị eriri, ngwa ekwentị, ekwentị ekwentị, ikpe batrị, chaja, batrị mmezi nke batrị-acid batrị, disk diski 3, diski U, kaadi SD, kaadị CF, njikọ USB, Bluetooth Ngwaọrụ, na ndị ọzọ.
Sọọsọ: folda, album, igbe mpịakọta, PP olulu mmiri, loops pen, katkized ink, akwụkwọ mpịakọta toner, na ndị ọzọ.
Medical na Daily ngwaahịa: elekere, arịa kichin, okpu mmiri mmiri mmiri, mkpuchi mkpuchi, ngwa ekwentị mkpanaka, ọla edo dị nro, na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, njikwa, mkpuchi nchekwa, karama ịchọ mma, ite kọfị, igwe ịsa ahụ, ndị na-ekpo ọkụ ikuku, Ọdụdọ eletriki, kettles eletriki, ndị na-ehicha ọkụ. , ndị na-ekwu okwu, nkpuchi na ihu igwe na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ obodo na ihe ndị ọzọ.
Ngwaahịa ahụike: ngwaahịa ụmụaka, matarasị ikuku, akwa hanga, ihe eji akọ ubi, ngwa nri ebe eji esi nri, ịsa ahụ, isi mmiri, na ihe ndị ọzọ.
Categories Technologies Tags zụta ultrasonic welder, zụta igwe na-ekpo ọkụ ultrasonic, ultrasonic plastic welder, ultrasonic plastic welder maka ire ere, ultrasonic plastic welder ego, ultrasonic welder soplaya, ịgbado ọkụ ultrasonic, ultrasonic ịgbado ọkụ na akụrụngwa, ultrasonic ịgbado ọkụ igwe, ultrasonic ịgbado ọkụ usoro, US welder plastic, US welder Mail igodo
ụkpụrụ ịgbado ọkụ ultrasonic | US ebili mmiri welding tiori